မြန်မာSanchaung, YANGON ရှိ 777 Beer and Restaurant | Drecome
777 Beer and Restaurant | Sanchaung, YANGON.
Chinese food | Thai | Rice & Curry | Sea Food | Café | Bar | Alcohol | Parking | Chinese Menu | Lunch | Dinner | Groups / Party | Business | Reasonable
No.(1,2,3), Sanchaung Street, Shin Saw Pu Quarter, Sanchaung Township
အနီးအနား ရွှေမန်းမှတ်တိုင် မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
777 Beer and Restaurant ဆိ်ုင်သည် စမ်းချောင်းလမ်း ၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက် ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော အနောက်တိုင်းအစားအစာများ ၊ အာရှ အစားအစာများ ၊ တရုတ်အစားအစာများနှင့် ဘီယာများ ရရှိနိုင်သော ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိ်ုင်တွင် ရောင်းချသော ဟင်းလျှာများကိုလည်း အတွေ့အကြုံရင့်သော ဝါရင့်စာဖိုမှုကြီးများမှ ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်သောကြောင့် အရသာနှင့် ပက်သက်ပြီး စားသုံးသူများ စိတ်တိုင်းကျ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
777 Beer and Restaurant ဆိုင်တွင် စားသုံးသူများ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်စေနိုင်သော အသား ၊ ငါးများနှင့် အသီးအရွက်များကို ရွေးချယ်နိ်ုင်ပြီး ဆိုင်တွင် လာရောက် စားသုံးသူများမှာလည်း မြန်မာနိ်ုင်ငံသား များသာမက နိုင်ငံခြားသားပါ လာရောက် စားသုံးသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသား ၊ ငါးများနှင့် အသီးအရွက် များကို လတ်ဆတ်စွာဖြင့် အသုံးပြုထားသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆိုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၁၁ နာရီမှ စတင်ဖွင့်လှစ်သောကြောင့် နေ့လည်စာကို ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွင် စားသုံးချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။
777 Beer and Restaurant ဆိုင်သည် ကျယ်ဝန်းပြီး ဆိုင်အတွင်းတွင် ထိုင်စားသုံးချင်သူများနှင့် အပြင်တွင် ထိ်ုင်စားသုံးချင်သူများအတွက်လည်း လေ၀င်လေထွက် ကောင်းမွန်သောကြောင့် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဆိုင်တွင် ကားရပ်နားရန် အတွက်လည်း နေရာကျယ်ဝန်းသောကြောင့် စားသုံးသူများ၏ ကားများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဆိုင်တွင် လူဦးရေ ၂၅၀ ခန့်တစ်ပြိုင်နက် စားသုံးနိုင်ပြီး မွေးနေ့ ပွဲများ ၊ ပါတီများ ကျင်းပချင်သူများအတွက်လည်း ဆိုင်တာဝန်ခံမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးသောကြောင့် စိတ်တိုင်းကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆိုင်ရဲ့ တည်နေရာမှာ သွားရလွယ်ရ လွယ်ကူသော စမ်းချောင်းတစ်ဝိုက်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် မြေနီကုန်း ရှိ ကုန်တိုက်များတွင် ရှော့ပင်းထွက်ရင်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှိ စားစရာများမှာလည်း ဈေးနုန်းသင့်တင့်သောကြောင့် လူတန်းစားမရွေး စားသုံးသူများအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ သွက်လက်မြန်ဆန်သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် စားစရာများ မှာအရသာရှိသောကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
777 Beer & Restaurant Coupon
at No.14, Sanchaung Road, Corner of Tha Pyay Nyo Street
Oscars Hot Pot & BBQ Restaurant
No.(F/15),Sanchaung Street, Sanchaung Township, Yangon.
17/18/19/20, San Chaung Street, Sanchaung